Masoivoho japoney: nomarihina ny faha-85 taon’ny amperora | NewsMada
Masoivoho japoney: nomarihina ny faha-85 taon’ny amperora
Nomarihina, omaly teny amin’ny tranon’ny masoivoho japoney eto amintsika, eny Iva ndry, ny tsingerin-taona faha-85 nahaterahan’ny amperora japoney, Akihito. Ny 23 desambra io daty io, saingy tanterahina amin’ny andro samihafa ny fanamarihana, any amin’ireo firenena misy masoivoho japoney.
Tsiahivina fa io daty io ihany koa no ankalazan’ny vahoaka japoney ny fetim-pireneny. Anisan’ny mampiavaka io fotoana io ny fanokafana ho an’ny daholobe ny lapan’ny mpanjaka, ao Tokyo, izay tsy mivoha ho an’ny rehetra, toy izao, raha tsy indroa isan-taona ihany. Raha tsiahivina ny tantara, efa hatramin’ny taona 660 talohan’i Jesosy Kristy no nisy amperora tany Japon. Nanomboka ny 12 novambra 1990, fotoana nametrahana azy tamim-pomba ofisialy ho amperora kosa ny nitondran’i Akihito.
Mariky ny fiandrianam-pirenena sy ny maha iray tsy mivaky ny vahoaka japoney ny amperora. Anisan’ireo mpanjaka tena mamim-bahoaka i Akihito. Azo lazaina ho miavaka ny fanamarihana ny faha-85 taony, satria ity no fankalazana tsingerin-taona farany atrehiny amin’ny maha amperora azy.
Raha tsiahivina mantsy, nangataka ny hiala eo amin’ny toeran’ny amperora izy, roa taona lasa izay, noho ny fahanterany sy ny tsy fahasalamany. Nankatoavin’ny parlemanta japoney izany ary nambaran’ny praiminisitra, Shinzo Abe, herintaona lasa izay, fa ny 30 avrily 2019 izao no hiala eo amin’ny fanjakana ny amperora.
Ny ampitson’io, ny 1 mey 2019 kosa, hiakatra eo amin’ny fanjakana ny zanany lahimatoa, i Naruhito, izay ho amperora japoney, manomboka amin’io fotoana io.